Ogaden News Agency (ONA) – Ururkii TPLF wuxuu noqday xisbi qoys leeyahay – Seeye Abraha
Ururkii TPLF wuxuu noqday xisbi qoys leeyahay – Seeye Abraha
Atlanta (Gerogia):- Seeye Abraha oo ahaa wasiirkii horee Gaashaan-dhiga Itobiya isla markaana xubin sare ka ahaa ururka TPLF ayaa shir uu ku qabtay magaalada Atlanta ee dalka Mareykanka ka sheegay inuu ururkii TPLF noqday xisbi qoys isagoo raaciyay waa xisbi ay yeesheen qoyska Meles Zinawi iyo afadiisa Azeb Mesfin.
Wuxuu sheegay Abraha oo hadda ka mid noqday mucaaradka ahna madaxa xisbiga Medrek, inay Itobiya mareyso hadda xaalad u dhiganta maalmihii ugu dambeeyay xukuumadii Col Mingistu Haile-mariam, taasoo ahayd buu yidhi nolosha oo noqotay mid aad u adag iyo kacdoon shacab oon la qarin karin. Sicir bararka ayaa cirka isku shareeray oo gaadhay 30%, musq-maasuqa ayaa noqday arin caadi ah, iyadoo ay Itobiya ka horeyso xagga musuq-maasuqqa Kenya oo arintaa caan ku ahayd.
Meles wixii ka dambeeyay doorashadii 2005 wuxuu abuuray xisbiyo aan jirin iyo waliba haya’do dacayadeed oo sidoo kale loogu talagalay inay u shaqeeyaan xisbiga xukunka haya. Wuxuu tusaale u soo qaatay 10 million oo birr oo doorashooyinka soo socda loo qoondeeyay xisbiyada siyaasiga, in 9 million la siiyay EPRDF intii soo hadhay oo kali ah loo tuuray xisbiyada kale, iyadoo xisbiigiisa Medrek la siiyay 3500 taasoon ku filnayn buu yidhi inaan hal habeen ku kiraysano hall aan ku shirno.
Wuxuu yidhi Mr. Seeye Abraha EPRDF-ta oo arimaha xuquuqda aadanaha aad ugu tuntay ayaa waxay bilaabeen inay yidhaahdaan waxaan nahay; -Xukuumad Horumarin ku hawlan- oo warbaahinta dalka aan loo ogolayn inay wax kale ka hadlaan. Waxay mamnuuceen xataa warbahinadii kale sida idaacadda Germalka ee Deutsche Welle ee afka Amxaariga inay ka hadlaan wax aan ahayn horumar oo sidaa digniin lagu siiyay. Hasa ahaatee si kastoo ay isugu dayaan EPRDF-tu inay been ka sheegaan arimahaa, hadana dhibaatada dhaqaale ee dalka haysata waa wax aan la qarin karin oo dadweynaha ay ka hadlaan sida saboolnimada ka jirta Itobiya iyo nolosha sii kacaysa.
Waxaa kaloo uu ka hadlay oo ahaa arimaha sida aadka ah looga dooday qorshaha kooxda loo yaqaano – Andinet- isagoo yidhi dadka Itobiya waa inay sameeyaan kacdoon aan hubaysneen. Wuxuu ugu baaqay dadweynaha inay heshiiyaan oy iscafiyaan oy iska kaashaadaan xukunka sidii loo ridi lahaa. Wuxuu sheegay Seeye Abraha oo ahaa wasiirka gaashaandhiga in 90% ciidanka Itobiya ay yihiin Tigree, isagoo yidhi qudhooda way jecelyihiin inay helaan xoriyad iyo dawlad qaanuun ku dhisan. Waa in Itobiyaanku diyaar u noqdaan in lawada noolaado oo la’is cafiyo ayuu ku dhawaaqay, isagoo ogsoon dambiyada ay ka galeen shucuubta Itobiya. Su’aalo badan oo la weyday ayaa waxaa ka mid ahaa booliiska federaalka taasoo uu yidhi la mid ma’aha booliiska caadiga ah ee waa ciidan loogu talagalay inay ka hortagaan oy baabi’yaan kacdoonada shacbiga ee ka dhaca magaalooyinka iyo agagaaradooda.
Waxyaabaha kalee lagaga hadlay shirkaa waxaa ugu badnaa in dagaaladii horey u dhacay la iloobo oo loo wada jeedsado sidii la’isaga ridi lahaa xukunka qoys ee Meles iyo afadiisa ee dhibaatada ku haya shacabka Itobiya, iyadoo daqiiqad aamusnaan ah loo istaagay YeneSew Gebre oo ahaa ninkii macalinka ahaa ee isgubay iyo dhamaan kuwa naftooda u huray xoriyadda, cadaaladda iyo sinaanta.